Apple Chitoro | Nhau dzePhone (Peji 2)
Iyo yazvino vhezheni yemukurumbira mutambo Wekuda Kwebasa: Nharembozha mwaka 7 yave kuwanikwa. Unogona kurodha mutambo uyu mahara kubva kune yako iPhone kana iPad
Zvitoro zvinotevera zveApple zvichavhura madhoo avo svondo rino zviri muUnited Emirates.
Kana iwe ukangoerekana uine anopfuura gumi nemashanu maapplication ekuvandudza muApp Store, usanetseke, ndechimwe chinhu chinoitika kwatiri tese.
Kutanga Chipiri chinotevera, Chivabvu 19, mamwe eApple Chitoro iri muItari ichavhurazve madhoo avo mushure memasvondo gumi ekuvharwa.
Switzerland ichavhura ayo ese Apple Stores svondo rino
Kutanga mangwana, Chivabvu 12, Apple Store muSwitzerland ichavhura zvekare masuo ayo panguva yakadzikiswa kubva 11am kusvika 18 pm
Muvhiki kana maviri Australia neAustria vaigona kuona Apple Store yakavhurwa
Apple inochengetera muAustralia neAustria inogona kuvhura mumavhiki mashoma maererano nezvazvino zvirevo zvekambani
Apple inoronga kuvhurazve Apple Store muna Chivabvu
Kubva Cupertino vanoronga kuvhurazve Apple Store mukati memwedzi waMay, chero bedzi mamiriro ezvinhu akakwana asangana
Iwo maApple Stores anogona kuvhurazve madhoo avo pakati paApril
Kubva muna Kubvumbi 5, maApple Stores ekutanga anogona kutanga kuvhura madhoo avo, zvinoenderana nekushanduka kwecoronavirus.
Anenge ese maApple Stores muChina ave kuvhurwa
28 pane makumi maviri nemaviri emaApple Stores ayo Apple akagovera kuChina, akatovhurwa, kunyangwe mazhinji acho mumaawa akaderedzwa kubva 42 kusvika 11 masikati.
Inopfuura hafu yeApple Stores muChina yakatovhurwa
Nekufamba kwemazuva, nhamba yeApple Store inovhura magonhi ayo iri kuwedzera uye nhasi kwatova nezvitoro makumi maviri nemapfumbamwe zvakavhura madhoo avo kuChina.
Apple inononoka kuvhurwa kweApple Chitoro cheChina nekuda kwecoronavirus
Zuva rinotarisirwa kuvhurwa kweApple Chitoro muChina, muna Kukadzi 9, rakanonoka zvachose naApple.
Iyo Apple Chitoro app inovandudzwa kune vhezheni 5.7
Apple inogadziridza yeApple Chitoro kunyorera kuti iwedzere kuvandudza musarudzo dzekutenga nekuwedzera kuunganidzwa kwezvigadzirwa muWallet
Rimwe gore uye makore gumi nematanhatu apfuura, maApple Stores akatanga kupenda dhayi kutsvuka kuratidza kwavo kuzvipira kurwisa chirwere ichi.
Mexico inovhura Apple Store nyowani musi waGunyana 27
Musi waGunyana 27, Apple ichavhura yechipiri Apple Store iri muMexico, kunyanya muAntara Shopping Center
Apple inopa kusvika munaKurume 3, 2020 kune maapplication evana kutevedzera mitemo mitsva
Apple inopa kusvika munaKurume 3, 2020 yezvibodzwa zviri muchikamu chevana kutevedzera zvirevo zvitsva zvekudzivirira vana
Rimwe gore, iyo webhusaiti yeApple inopa mutero kuna Martin Luther King
Rimwe gore, webhusaiti yeApple inobhadhara mutero kuna Martin Luther King, mumwe wemagamba aTim Cook, Apple's executive director.
Chitoro chidiki cheApple cheJapan kuti chivhare zvachose mushure memakore gumi nematatu akavhurwa
Vakomana vanobva kuCupertino vanoita sarudzo yekuvhara iyo diki Apple Store uye imwe yevakuru muJapan, Sendai Apple Store.
iTunes Connect ichavhara kubva Zvita 23 kusvika 27
Apple inoyambira kuti iTunes Connect ichavhara kubva Zvita 23 kusvika 27
Apple inodzoreredza Certified Yakagadziriswa peji peji
Apple yakavandudza zvachose dhizaini uye ikozvino inonakidzwa nehunyanzvi hwakafanana neiyo yese webhusaiti yeApple uye zvino yave nyore kushandisa.
Mushandirapamwe weKisimusi weApple wave kurarama neakawedzerwa nguva dzekudzoka
Mune zvipo zveKisimusi zvatinotenga kuApple, tichanakidzwa nenguva yekudzoka yakareba kusvika Ndira 20
Inotevera iconic Apple Store kuvhura paChamps Elysees muParis
Inotevera Mbudzi, Apple ichavhura Apple Store nyowani muParis, kunyanya paChamps Elysees muParis.
Apple inopa iyo nyowani Chitoro cheApple muKyoto pamberi pekuvhurwa kwayo Mugovera 25
Vakomana vanobva kuCupertino vanopa chingave chiri chitoro cheApple chakanakisa, Chitoro cheApple muKyoto, tsika nemagariro munzvimbo imwechete.
Iyi ndiyo nyowani Apple Piazza Liberty, inoshamisa Apple Store muMilan
Apple inoburitsa mifananidzo yekutanga yeApple Piazza Liberty, imwe yeakanakisa Apple Stores ataona.
Apple ichavhura muna Chikunguru 26 Apple Store nyowani muMilan ine yakasarudzika dhizaini
Mumakore achangopfuura, takaona kuti vakomana veCupertino vatanga kugadzirisa sei zvimwe zvezvitoro zvavo zvekare, kusanganisira zvekare.Pana Chikunguru 26, Apple ichavhura itsva uye inomiririra Apple Store pakati peMilan ine dhizaini yakatosiyana. kune vanozivikanwa kusvika ikozvino
Musi waJune 30 Apple ichavhara iyo Apple Chitoro Iyo Pier muAtlantic City
Chitoro cheApple muAtlantic City ichavhara madhoo ayo chaizvo muna Chikumi 30, nekuda kwekuderera kwenhamba yevashanyi nevashanyi vanoshanyira nzvimbo ichiri kuvhurika.
Apple ichavhura yechitanhatu Apple Store muJapan muna Kubvumbi 7
Inotevera Kubvumbi, kunyanya yechi7, rave riri zuva rakasarudzwa neApple kuvhura yechitanhatu Apple Store munyika.
Mvura Alarm XT, yakagadziridzwa ichipa rutsigiro kune iyo iPhone X
Hongu, vatora nguva yakareba kuti vazviite asi zvirinani isu tinogona kutotaura kuti imwe yeakanakisa mafomu ekufungisisa ...
Yekutanga Apple Store muSouth Korea ichavhurwa muSeoul muna Ndira 27
Anenge mwedzi mushure mezuva rakarongwa kutanga, Apple Store yekutanga muSouth Korea ichavhura madhoo ayo muna Ndira 27
Hurumende yeIndia inovhura nzira yekuvhurwa kweApple Stores
Hurumende yeIndia yakachinja zvakanyanya huwandu hwemari inokwanisa kuitwa nemakambani ekunze munyika, kubva pa49% kusvika pa100%, izvo zvinoita kuti Apple ivhure Apple Store yekutanga munyika pasina kutengesa zvigadzirwa zvakagadzirwa.
Chando ndiro dambudziko razvino kuApple Chitoro cheChicago
Iyo nyowani, uye zvino ingano, Chitoro cheApple muChicago, iri paRwizi rweMichigan haina kugadzirirwa kumira kudonha kwechando munzvimbo iyi, ichiratidza dambudziko hombe
Apple inoronga kubatanidza maapplication eIOS uye macOS
Apple inoronga kubvumidza muchinjika-chikuva maapplication kuti ashande pane ese ari maviri iOS uye macOS, pamwe kutobatanidza iwo maviri ezvitoro zvezvitoro.
App Santa inodzoka nezvibodzwa zveapps zvinosvika ku80%
Zvekare isu tatova nemaapplication eIOS uye macOS anowanikwa aine mutengo muApp Santa. Ehe, senge gore rega rega ...
Yekutanga Apple Store muSouth Korea ichavhurwa muna Zvita 30
Apple inovhara gore nekuvhurwa kweApple Chitoro chitsva, ichave iri Seoul, guta guru reSouth Korea, uye Angel Ahrendts achange ari pakuvhurwa kwayo.
Iyo DJI Mavic Pro Alpine White Edition drone, inongowanikwa kuApple Store
Iyo chena Alino edition yeiyo DJI Mavic Pro drone inowanikwa chete kuburikidza neApple Chitoro online uye panyama.
IPhone X haigone kutorwa kuApple Stores muFrance neBelgium
Nekuda kwemitemo yekurwisa hugandanga, vashandisi vakatenga iyo iPhone X havazokwanise kuenda kuApple Stores kunotora.
Shiri dzinopfuura pedyo neApple Chitoro dziri kukwezva nemwenje wehusiku wechitoro.
Wanga uine iPhone yakaputsika here? Apple yakasimudza mutengo wekugadzirisa
Apple yakasimudza zvakanyanya mutengo wekugadziriswa kwescreen uye kumwe kukuvara muApple Chitoro pasina ziviso isati yaitika.
Haasi ese maApple Stores anotengesa kunge hotcake, iyo Simi Valley chitoro ichavhara madhoo ayo mumazuva gumi nemashanu
Kana Chitoro cheApple chave pasi, iyo yakanakisa Apple inogona kuita kuivhara, sezvichaitika neSimi Valley
Kugadziridzwa kweApple Chitoro paFifth Avenue kuchapera munaNovember 2018
Iko kuvandudzwa kweiyo ngano Apple Chitoro paFifth Avenue kuchapera munaNovember gore rinouya, angangoita makore maviri mushure mekutanga kwemabasa.
Apple inoburitsa mifananidzo yekuvhurwa kweApple Chitoro Taipei 101
Apple inovhura iyo Apple Chitoro Taipei 101 uye inotitaridza kupemberera kwekuvhurwa kweApple Chitoro nemimwe mifananidzo yakanaka yemukati mayo.
Mumazuva mashoma iyo yekutanga Apple Store muTaiwan ichavhurwa zviri pamutemo, iyo nhamba yeApple zvitoro ichave 496
Logitech POP Smart Bhatani Zvirongwa Zvirongwa Zvino Zvinowanikwa pane App Store
Logitech's POP Smart Bhatani rakagadziriswa uye akangwara mabhatani izvozvi ave kuwanikwa muInternet uye epanyama App Store muUnited States.
Iyo iconic girazi cube reApple Chitoro paFifth Avenue yatove pamudyandigere
Shanda paApple Chitoro paFifth Avenue muNew York inoenderera pamwe nekubviswa kwegirazi cube pamusuwo.
Akweguru Apple Zvitoro Anogona Kugamuchira Kuvandudzwa Munguva pfupi
Apple zvitoro hazvisi zvezvitoro chete uye zveavo vari muCupertino zvakakosha zvakanyanya sekuona kwatakaita ...
Apple Inotangisa Nyowani Dubai Apple Chitoro Neinonakidza Carbon Fibre Windows
Apple inopa inoshamisa Apple Store muDubai ine inoshamisa inofamba kabhoni fiber windows windows kuti iwedzere mukati.
Mangwana iyo Apple Online Chitoro ichavhara yekuchengetedza kwemaawa mashoma
Sezvo isu tichiona pane Apple's technical technical peji, iyo Apple Chitoro ichavhara mangwana mangwanani kwemaawa mashoma.
Inoyerera email mutengi, yemahara kwenguva shoma
Inoyerera email mutengi, rakasiyana email mutengi rinowanikwa kurodha mahara kwenguva pfupi.
tiReader Pro, yemahara kwenguva shoma
Kunyangwe iri Svondo, vanogadzira havaregi kushanda uye inoramba ichipa kunyorera kwenguva yakatarwa yekurodha pasi. Mu…
Faira Nyowani - Photo Mhariri, yemahara kwenguva shoma
Faira Nyowani - Photo Mhariri chikumbiro chinotibvumidza isu kugadzirisa mapikicha edu nenzira yehunyanzvi.
QardioArm, yakasimbiswa blood pressure monitor ye iPhone yako neApple Watch
Qardio inozivisa kuuya kweiyo yakasimbiswa QardioArm yeropa rekucherechedza kuApple Stores kutenderera pasirese, zvese mumuviri uye online.
Chitoro chinotevera cheApple chaunoona chichivhura madhoo acho chiri muguta reGerman reCologne, guta rechina pakukura munyika.
Kambani yeCalifornia ine pamugwagwa wayo kuvhurwa kwechitoro chitsva muLatin America, ichi chiri chekutanga mundima yeArgentina.
Kwemaawa mashoma zvinokwanisika kutenga iyo kamera yakaziviswa kuCES 2017Omna 180 Cam HD muApple Chitoro online pamutengo we € 229,95.
Makore gumi achishanda muApple Chitoro: kubva kudenga kuenda kugehena
Mumwe aimbove mushandi weApple anotaura nezve ruzivo rwake rwekushanda mune chimwe chezvitoro zvaro uye kuti zvese zvachinja sei mumakore gumi apfuura.
Kugadziridzwa kweApp Store paFifth Avenue yeNew York yatotanga
Basa rekugadzirisa ratanga paApple Chitoro paFifth Avenue muNew York, ichipa imwe nzvimbo yechitoro
Kuburitswa kwakasimbiswa neiye akasimbisa kuvhurwa kweApple Chitoro muBrussels kunoratidza kuti Bruges inogona kuve nechitoro chayo muna 2018.
Mushure memwedzi yakati wandei yerunyerekupe, Apple yakasimbisa kuti ine hurongwa hwekuvhura yekutanga Apple Chitoro muSouth Korea.
Zvirongwa zvekumaguta zveMilan zvinoratidza zvirongwa zveApple zvekugadzira Chitoro cheApple muMilan chakagadzirwa naNorman Foster's studio.
Apple inoenderera mberi nechirongwa chayo kuvhura Apple Store paChamps Elysees muParis
Sekureva kwechinyorwa cheFrance, Apple iri kuenderera mberi nezvirongwa zvayo zvekuvhura Apple Store paChamps Elysees muParis.
Maawa mashoma apfuura iyo saga yakazara yeMega Man mitambo yakavhurwa yeIOS zvishandiso uye zvakare ...
Zvikonzero zvacho hazvisati zvazivikanwa, asi Apple yabvisa sarudzo yekubhadhara nekuchinjisa kubhangi muApple Chitoro chepamhepo kuGerman.
Apple Nhema Chishanu: makadhi echipo uye kwete ezve kuchangoburwa
Nhau dzakaipa kana iwe waitarisira madhiri makuru ekutenga zvigadzirwa zveApple zvitsva paChishanu Chishanu - iwo anongova makadhi echipo.
Yechitatu Apple Store muParis ichavhura muna Zvita 3
Vakomana vanobva kuCupertino vanozovhura Apple Store nyowani muParis musi waZvita 3, vachiva wechitatu muguta uye makumi maviri nerimwe munyika yese.
Kubva Zvita 5 kusvika 11 tinogona kutora chikamu muAwa yeCode mashopu kuApple Chitoro
Angela Ahrendts anosimbisa kuti kubva Zvita 5 kusvika 11, vadiki vachakwanisa kuita mapurogiramu emusangano nekuda kweAwa yeKodhi.
Apple inowedzera nguva yekuchinjana uye yekudzoka yeKisimusi
Sezvimwe pane dzimwe nguva, vakomana vepaApple vanowedzera nguva yekuchinjana uye yekudzoka yezvose zvakatengwa zvakaitwa kuApple Store.
Tayasui Ruvara runowanikwa mahara kubva kuApple Store app
Kutsvaga bhuku rekutara pane yako iPhone kana iPad? Iyo Apple Store app inopa iyo Tayasui Colour app yemahara.
Wiil.i.am Mabhatani mahedhifoni kuti atengeswe muApple Chitoro
Wiil.i.am maBhatani mahedhifoni anozotengeswa muApple Chitoro pamutengo wavo wenguva dzose, saka Apple Beats haisiyo yega sarudzo.
Apple.com: Makumi maviri emakore eWebhu mune 3-Minute Nguva-Kupera
Ungade here kuona kuti webhusaiti yeApple yachinja sei mumakore makumi maviri? Pano tinokupa iwe 20-miniti Nguva Kupera vhidhiyo iyo inokuratidza iwe.
Boka rembavha rinoba maPhones zviuru gumi nemaviri kubva kuApple Chitoro
Boka rakarongeka rembavha rakakwanisa kuba maPhones akati wandei kubva kuApple Chitoro muMassachusetts kwehuwandu hwakazara pasi pe € 12.000 chete.
Mushure megore rinopfuura gore rekuvaka, vakomana vanobva kuApple vanotangisa kugadziridzwa kweApple Chitoro paRegent Street, zvichirerutsa pfungwa yemukati zvakanyanya.
Iyo Carnegie Library muWashington inogona imba yeApple Chitoro
Iyo inotevera mureza nzvimbo yeApple Chitoro iri muCarnegie Library yeWashington.
Apple inotanga kubvisa kunyorera kubva kuApp Store
Sezvatatoziviswa, Apple yatanga kuzivisa vagadziri kuti maapplication avo ari kuzobviswa muApp Store. Isu tinokuudza iwe nezve zvaunogona kusarudza izvozvi.
Apple iri kufunga kuvhura shopu yekutengesa muSouth Korea
Apple inoronga kuvhura chitoro chayo chekutanga muSouth Korea, imba yemuvengi wayo mukuru, Samsung. Izvi zvinogona kutora kanenge gore.
Mushure memwedzi yakawanda yerunyerekupe uye fungidziro, Apple inozopedzisira yave neruzivo rwekuti inotevera Gunyana 24 ichavhura iyo Apple Store muMexico
Iko kuverenga kunotanga. Apple yavhara Apple Store Online kugadzirira kusvika kweiyo iPhone 7 uye Apple Watch 2.
Injiniya akaunza macOS kuIntel haapi basa seGenius yekare
KuApple haisiri goridhe rese rakanangana neHuman Resources, ivo vangoramba kukwikwidza kweGenius yeJK Scheinberg nekuda kwezera rake ...
Apple inogadzirira kuvhura iyo yekutanga Apple Store muMexico uye muColonia
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti inotevera Apple Chitoro kuvhura ichave iwo ari muMexico City neCologne kuGerman.
Apple Zvitoro zviri kuwedzera kupfuura chete "Zvitoro"
Apple inoda kuti zvitoro zvayo zvive zvakawanda kupfuura zvitoro uye yatotanga kubvisa izwi rekuti "Chitoro" kubva pane yazvino "Apple Chitoro."
Isati yatanga iCloud uye dziviriro iyo inokutendera iwe kudzima zvachose zvishandiso zvine chekuita neakaunzi, iyo…
Nyowani Apple Tambo tambo yekupemberera maOlimpiki
Apple yatanga mhando nyowani yetambo dzeyiloni nemireza yenyika gumi nemana, dzinogona kungotengwa muApple Chitoro muBrazil.
Musi waChikunguru 30, Apple inoronga kuvhura chitoro chekutanga chayo munzvimbo yeBrooklyn yeNew York.
Apple Stores muRussia haina yavo sevhisi yekugadzirisa zviitiko zvinosanganisira iPhones kunze kwewarandi.
Iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakasimuka nhasi nematare matsva mairi ayo anonzi akaputsa patent yeiyo carousel pawebhusaiti yayo.
Google Dudziro ichangobva kuvandudzwa zvakare ichiwedzera rutsigiro rwekushandura mimwe mitauro pasina internet kubatana.
Musi waJune 30, vakomana veCupertino vanozovhura yavo sitoro nhamba 484 muHong Kong, yechishanu munyika.
Mumazuva mashoma Apple ichavhura chitoro nhamba 41 pane makumi mana nemaviri akarongwa mudunhu reAsia mumwedzi isingasviki makumi maviri
Ruvara rwebhuruu rweyunifomu yevashandi veApple Chitoro zviri pachena sechimwe chezvikonzero zvekuba muApple Store muNew York.
Kwenguva yakati zvino, kunyanya mushure mekuratidzwa kwemapepa aSnowden, chengetedzo uye ...
Mumwe aimbove mushandi weUK Apple Store akapa hurukuro achiti hazvisi zvese zvakanaka sezvazvakapendwa muApple Stores
Hurumende yeIndia inoita kunge iri kupa dambudziko rakawanda kupfuura iyo kambani yeCompertino-inoda kuda kuchengetedza vagadziri venyika.
Yekupedzisira Apple Chitoro iyo Apple iri kutotsvaga vashandi iri muBrooklyn, imwe yenharaunda dzine vanhu vakawanda muUnited States.
Nezuro rakapemberera makore gumi nemashanu eApple Stores
Nezuro, Chivabvu 19, anga ari makore gumi nemashanu kubvira kuvhurwa kwemaApple Stores ekutanga muUnited States
Kubva parwendo rwekupedzisira rwaTim Cook kuenda kuIndia, isu takawana ruzivo rwakawanda, pakati paro kuvhurwa kwezvitoro zvitatu zvitsva munyika iri pachena.
Tim Cook achaenda kuIndia kunotanga kuwedzera kwake munyika
Kupera kwemwedzi uno, Tim Cook anoronga kuenda kuIndia, kunosangana neMutungamiriri uye nekukurumidza kuvhurwa kwezvitoro zvake.
Microsoft ine zvitoro zvinopfuura zana pasina vatengi vayo
Zvitoro zveMicrosoft, izvo zvine kambani iri pakati peUnited States neCanada, zviri kutokwezva kutarisisa kwevashandisi.
Iyo Apple Chitoro Pamhepo inotova nechikamu chizere nezvigadzirwa zvakanangana nekuvandudza kuwanikwa kwemidziyo yako
Musi waMay 14, Apple ichavhura iyo makumi maviri neApple Chitoro muFrance, iri muMarseille
Musi waApril 22, Zuva rePasi rinopembererwa uye seuchapupu hwekuzvipira kwaApple ku ...
Iyo nyowani Vine yekuvandudza inotitaridza bhatani nyowani iro rinongoerekana roridza zvese zvirimo zvemushandisi pasina kuenda imwe neimwe
Kana Apple pakupedzisira yawana mvumo kubva kuhurumende yeIndia yekuvaka iyo yekutanga Chitoro cheApple, inoda kuti ive chiratidzo
IPhone SE uye 9.7 ″ iPad Pro iri kuuya: Apple Store yakavharwa
Dai iwe wanga wakamirira kutsigirwa zviri pamutemo kuti nyowani hardware inosvika nhasi, mira kumirira: Apple yakavhara iyo Apple ...
Apple inoramba ichiwedzera huwandu hwezvitoro zvayo muChina zvichitevera chinangwa chekusvika makumi mana muna40….
Apple inoda kuvandudza mashandiro eGenius Bar
Kana iwe uine rombo rakanaka uye uine Apple Chitoro padyo nekwaunogara, zvingangove kuti wakamboshanya ...
Apple inogona kuvhura mutsva muApple Chitoro muStockholm
Angela Ahrendts anogona kunge ari kupedzisa ruzivo kuti avhure chitoro chekambani nyowani muguta guru reSweden iro raizonakidzwa nemhando dzese dzeumbozha.
Apple kuvhura Apple Store itsva muMiami
Apple ichangobva kusaina chibvumirano nemuridzi wechitoro ichi chiri kuvakwa muMiami kuvhura Apple Store nyowani
Apple inotanga kutengesa iyo Virtual Reality View-Master muzvitoro zvayo
Apple payakapa mari yemari yekota yekupedzisira ya2015, Tim Cook akabvunzwa zvaaifunga nezve ...
Kukwidziridzwa "Kudzokera Kuchikoro" kunodzokera kuAustralia neNew Zealand
Kukwidziridzwa "Kudzokera Kuchikoro" kunodzokera kuAustralia neNew Zealand kuitira kuti vadzidzi vagamuchire mahara mahara.
Apple ichavhura yayo yechishanu Apple Store muChina mumwedzi, uye pane makumi matatu nematatu
Musi waNdira 31 kuvhurwa kwechitanhatu chitoro chekambani yeapuro munyika yeAsia kuchaitika kusvika zvino mwedzi uno, kutowedzera 33.
Paris kuvhura Apple Store nyowani paChamps Elysees
Apple ichavhura yayo XNUMXth Apple Store muFrance, iri paChamps Elysees muParis.
Apple kuvhura mana maApple Stores kuChina muna Ndira
Apple inoenderera ichikura ichienda kundima yeMandarin, sezvakaratidzwa neana Apple Stores ayo anovhurwa kuChina munaNdira.
Apple ichavhura yekutanga Apple Store muMexico
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti Apple yaizoda kuvhura Apple Store itsva muMexico, inozove yekutanga munyika uye yechitatu muLatin America.
Apple inodonhedza mifananidzo yeiyo nyowani nhema nhema tambo yeMilanese
Apple inosvina mifananidzo yeiyo nyowani nhema nhema yeMilanese tambo yeApple Tarisa Space Nhema
Dhawunirodha Union yemahara kubva kuApple Store App. Tinokuratidza sei
Apple yakadzosera application yemahara iyo inowanikwa kubva kuApple Store application. Isu tinokuratidza maitiro ekusununguka Union.
Apple Stores inotengesa zvirema kubva muna 2016
Zvinotaridza kuti Apple inoda kutora hutano zvakanyanya. Chinhu chinotevera chichaita kutengesa hurema zvigadzirwa muApple Stores.
Phil Schiller anotora pamusoro peApp Store. Jeff Williams, COO nyowani yaApple
Iko kune mafambiro pakati pevatungamiriri veavo veCupertino. Musoro wekambani wekushambadzira uri zvakare mutariri weApp Store.
Apple Store Hong Kong inowedzera pasi rechitatu
Chitoro chitsva cheApple muHong Kong chakamanikidzwa kuwedzera furati yechitatu nekuda kwekubudirira kwairi kuita.
Bhomba inotyisidzira kuApple Store yeJapan inomanikidza kuvhara kwayo
Iyo Ginza Apple Chitoro muJapan yakatambura bhomba kutyisidzira mazuva mashoma apfuura izvo zvakamanikidza kudzimiswa kwechiitiko icho chakange chakarongwa.
Uku ndiko kuvhurwa kweApple Chitoro muDubai [vhidhiyo]
Muvhidhiyo ino tinogona kuona kuti kuvhurwa kweApple Chitoro muDubai, chimwe chezvakatarisirwa kwazvo panguva yacho.
Singapore kuvhura yekutanga Apple Store muna 2016
Singapore ichava imwe yenyika dzinozovhura yayo yekutanga Apple Store mu2016
Apple kutanga kupa kutsiva iPhones yekugadzirisa
Apple ichatanga kupa kunze-kwe-kuchitoro kugadzirisa mukutsinhana neimwe yekutsiva foni kuchengetedza yekumirira.
Chrome inovandudzwa nezvitsva zveIOS 9 zvePadad
Google ichangobva kugadzirisa yayo Chrome browser kuenderana nemabasa matsva eIOS 9 yePadad
Aya ndiwo matafura matsva eApple Stores ayo anopindura iyo 3D Kubata kweiyo iPhone 6s
Kambani yeapuro irikushandisa matafura akakosha muzvitoro ayo anopindura kumanikidza kwatinoita paPhones.
Uku ndiko kuvhurwa kweApple Chitoro muBrussels [vhidhiyo]
Vhidhiyo iyi inotiratidza kuvhurwa kweApple Chitoro muBrussels, icho chinouya nezvakawanda zvakasarudzika mukati.
Nezuro Chitoro cheApple muBrussels chakagadzira kuvhurwa kwayo kwepamutemo, yega muBelgium uye yekutanga yezvitoro zvechizvarwa chitsva zvakagadzirwa naJonny Ive.
Uku ndiko mukati nekunze kweChongqing Apple Store, iyo ichavhura mangwana
Chitoro chitsva cheApple chiri kuvhura mangwana kuChina chagadzirira zuva guru. Saka zviri mukati nekunze.
Uku kwaive kuvhura kukuru kweiyo Westlake Apple Chitoro
Ichi chaive chikuru kuratidzwa kweichi chitsva uye chinonakidza Apple Store iri muChina.
Iwe unogona ikozvino kubhadhara nePayPal mune imwe Apple Chitoro online
PaApple Zvitoro zvinotogamuchira PayPal senzira yekubhadhara kutenga zvigadzirwa zveApple uye zvishandiso zveiyo iPhone, iPad nevamwe.
Apple inotsanangura zvayinopa kune Nhema Chishanu
Rondedzero yeApple's Nhema Chishanu inopa kuti uwane makadhi echipo ekutenga iyo iPhone, iPad, Mac, iPod kana Beats mahedhifoni.
Fashoni nyowani: »swaggers» yakaungana pamberi peApple Stores, chitendero kana kuratidzira?
Fashoni nyowani inoita kunge yakagadzwa muApple Chitoro paPaseo de Gracia, Barcelona, ​​uko mapoka emadhorobha anoungana kuzopedza masikati pamikova yayo.
Kumirira nguva yeiyo iPhone 6 Plus huwandu kusvika kumatatu kana mana masvondo
Iyo yekumirira yeteminal inogona kusiyana zvichienderana nemodeli uye fomati yekutenga, kune iyo iPhone 6 Plus isu tinofamba mumavhiki e3 kusvika ku4 ekumirira.
Vhura kuchengetedzwa kweiyo iPhone 6 uye 6 PLus muApple Chitoro
Apple inobvumidza kuchengetedzwa kwe iPhone 6 uye iPhone 6 Plus pawebhusaiti yayo. Kufambira mberi mune yayo yekutengesa mutemo uye mufaro kune vashandisi, isu tinokupa iwe mamwe matipi.
Sarudzo dzekutenga iyo iPhone 6
Kutenga iPhone 6 kana 6 Plus imari yakasimba yehupfumi yatinotadza kufuratira, pano ini ndinopa sarudzo dzinokwana hupfumi hwese.
Apple yaizoenderera mberi nekuwedzera kwayo kuMiddle East uye yaizosvika kuUnited Arab Emirates, iro guta reDubai raizotambira Chitoro chikuru cheApple pasi rose.
IApple Chitoro inoteedzera yechipiri mukutengesa internet mushure meAmazon
Apple's online Apple Store yasvika panzvimbo yechipiri muhuwandu hwekutengesa internet, ichipfuura maStaples uye ichingova kumashure kweAmazon.
Yekutanga Apple Chitoro cheTurkey kuvhura muna Kubvumbi 5 muIstanbul
Chimwe Chitoro cheApple pasirese chinovhura madhoo ayo. Ino nguva ichave iri muIstanbul, nekudaro ichiva chitoro chekutanga chekambani munyika ino.
Iyo yemberi Apple Chitoro chePuerta del Sol muMadrid inofumura iyo facade
Yekupedzisira yakananga kuve nePuerta del Sol Apple Chitoro yakavhurwa, zvirinani, ndozvatinotarisira mushure mekuona yakagadziriswa fani mushure memakore maviri
Apple tsanangudzo, hello
Pakati pematanho, ivo varangarira avo vakagadzira uye vakaita mutsauko neMac typeface, uye ivo vakaisa mhoro pane lanyards
Apple Zvitoro zvinoenderana nemitengo kune zvimwe zvitoro zvepanyama
Apple Store inowirirana mutengo nemakwikwi. Iyo idiki diki inozivikanwa mutemo asi inogona kutivimbisa isu zvidiki diki kana isu tichiziva kuishandisa.
Apple inoderedza izvo zvinodiwa kuti upe yako yekare iPhone uye uwane dhisikaundi pane yako nyowani iPhone kana yanga yakanyorova
Kubva svondo rino Apple yakagadzirisa zvinodiwa kuti ugone kuburitsa chako chinyakare mudziyo kuti ugamuchire mutengo wekutenga kubva kwauri ...
Chitoro cheApple kuGranada?
Zvinoenderana neruzivo rwakawanikwa kubva kuEmilcar blog, Granada, dunhu reAndalusian rinogona kunge riine chitoro cheApple, iyo inonzi Apple ...
Apple Stores inoshandisa iBeacon kunatsiridza sevhisi nekutengesa
IBeacon ndechimwe chezvinhu zvikuru zvitsva zveiyo iOS7 system uye inogona kukanganisa zvakanyanya kutengeserana, kubvira ...
Apple yaigona kubvumidza kurodha zvekare shanduro dzeapps kubva kuApp Store
Apple iri kubvumidza shanduro dzekare dzekushandisa kuti dziiswe kubva kuApp Store kuitira kuti zvishandiso zvine shanduro yechinyakare yeIOS zvikwanise kunakidzwa nazvo
Kuvakwa kweApple Chitoro cheAustralia kunotangazve
Kambani yeCupertino yatanga zvakare chirongwa chekuvaka Chitoro cheApple muguta reBrisbane, chirongwa chakange chatofungidzirwa kukanzurwa.
Chitoro chitsva chinoshamisa cheApple muSan Francisco
Kambani yeapuro yasarudza kuvaka Apple Store nyowani muguta rakakosha kwazvo kwavari, San Francisco.
Chiitiko chemuverengi muSpanish Apple Chitoro neiyo yekutsiva chirongwa cheisiri-yekutanga marjaja
Chiitiko ichi chakatambura nemuverengi wedu, Alejandro, muApple Chitoro muMurcia maererano nechirongwa chekutsiva chisina chairo chaicho naApple
Iyo Apple Apple Chitoro app inopa kure yakabhadharwa maapps emahara
App yeApple Store yeIOS inotanga kupa maapp akambobhadharwa mahara kwenguva pfupi.
Iwe unogona ikozvino kutenga iPhone inosangana neYoigo muApple Chitoro
Yoigo ajoina runyorwa rwevashandisi iyo iyo iPhone inogona kutengwa kuburikidza neyakavanzika Apple Chitoro.
Uyu ndiwo muchina wavanoshandisa muApple Chitoro kutsiva iyo iPhone skrini
Mufananidzo wemuchina unoshandiswa muApple Chitoro kutsiva uye kuenzanisa iyo iPhone skrini panguva ino.
Mophie Juice Kurongedza Helium. Dzimba uye bhatiri kune yako iPhone 5
Kuongorora kweMophie Juice Pack Helium, bhatiri kesi yeedu iPhone 5 iyo isingazokuodza moyo
Iyo Apple Chitoro Pamhepo inogadziridzwa kuti ienderane nekubata maturusi
Iyo yeApple Chitoro yeApple yakagadziridzwa neiyo nyowani yakatwasuka yekufamba bhaa iyo yatinogona kufamba neswipe chiratidzo.
Vashandi veApple vanozokwanisa kutenga zvinopfuura zvitatu zvigadzirwa pagore pasipo yemitezo yemhuri yavo
Apple yakabvisa kukamurwa kwekutenga katatu pagore pane zvigadzirwa zvine 15% dhisikaundi. Iye zvino huwandu hwakawanda hwekutenga hwasara pakutongwa kwevashandi.
Chiitiko cheApple Chitoro: kana kuronga kwakawanda kuchizoguma kukuvadza mushandisi
Nhau iyo inorondedzera zvakashata chiitiko chakararama mushure mekuyedza kushandura iyo iPhone 5 nematambudziko akasarudzika ekudengenyeka muApple Store Río Shopping.
Iri ndiro bhuku rinoshandiswa neApple kudzidzisa yayo «Genius»
Nebhuku rino rekushandisa Apple inodzidzisa yayo "Genius"
Apple inovhura chitoro chayo chitsva muMurcia
Matambudziko emasheya eiyo iPhone 4 ari kupararira kune mamwe mamodheru uye maGenius Mabhawa anomanikidzwa kushandura chinetso chinogumbura cheiyo iPhone 4S.
Chinja mazwi ako kuita emoji yepakutanga neEmojizer. Isu tinobvarura makodhi ekusimudzira
Kana iwe uri wenguva dzose mushandisi wemasikirwo, haugone kupotsa iyo Emojizer application. Ichi chishandiso chinokutendera iwe kushandura chero ...
Kufamba kuburikidza neApple chitoro muNew York
NeChishanu rapfuura Apple yakaparura nzvimbo yayo hombe pasirese mungano yeGreat Central chiteshi muNew York….
Shiri Dzinotsamwa dzinouya kuhupenyu mupaki yemusoro muChina
Mwedzi mishoma yapfuura takakuratidza kuti mutengesi wakanyanya muApp Store, Angry Birds, akazadzikiswa sei mukushambadzira kwe ...
Wona pane yako iPhone iyo vhidhiyo inoratidza iyo Apple inoshandisa muzvitoro zvayo
Kana iwe wakambopinda muApp Store uchave waona kuti mazhinji ezvigadzirwa zviri kuratidzwa zvine ...
Kutaura vanogadzira Tom kusunungura Kutaura Tom 2 uye Kutaura Ben
Kutaura Tom ndechimwe cheanonakidza maapplication paApp Store. Yedu protagonist ikati ine hushamwari iyo ...
Itunes, iPhone uye iPod: Ch. 1, K-tuin haisi Apple
Vhiki rapfuura ndakave nerombo rakaipa iro bhatiri reMacbook Pro yangu rakatenga mu ...